Tirtaganga Water Palace, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Mahaliana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Lapan'ny rano any Tirtaganga
Tirtaganga Water Palace (Taman Tirta Gangga)
Topimaso amin'ny lapan'ny rano ao Tirtaganga
Ity dia iray amin'ireo kompleksista maritrano izay natsangana tamin'ny 1946 avy amin'ny mpitondra farany amin'ny faritany Karangasem. Tirtaganga dia any atsinanan'i Bali, akaikin'ny tanànan'i Amlapura, 70 km miala an'i Denpasar.
Ny fananganana dia natao tamin'ny 1942-46. mpanapaka antsoina hoe Anak Agung Anglurah Ketut. Ireo singa Bali sy Sinoa dia hita eo amin'ny rafitry ny lapan'ny rano. Ilay fitambarana iray manontolo dia toa labyrint hafahafa, ao anatin'izany ny dobo, loharano, tetezana ary lalan-kely, ary sary sokitra demonia sy biby maro karazana. Voahodidina zaridaina manankarena ny lapa.
Ny faritry ny lapa dia misy ambaratonga 3, izay samy manondro tontolo iray ny tsirairay avy:
Ny ambaratonga ambany dia antsoina hoe Bhur ary maneho ny tontolon'ny demonia. Misy zaridaina ho azy ireo mihitsy aza. Misy dobo lehibe iray eo akaiky eo, izay itohanan'ny tetezana. Misy sarivongan'ny demonia eo amin'ny tetezana. Misy rafitra loharano sy dobo trondro eo akaiky eo. Misy ihany koa ny tilikambo rano amin'ny haavon'ny ambany.
Ny ambaratonga afovoany dia antsoina hoe Bwah. Ity no tontolon'ny olona. Misy fandroana eto, izay, araka ny angano, dia noforonina tamin'ny lohataona masina. Mba milomano ao amin'izy ireo dia tsy maintsy mandoa vola 10 000 rupees ianao.
Ny ambaratonga ambony dia antsoina hoe Swah. Mampiavaka ny tontolon'ireo andriamanitra izy. Ity ny fonenan'ny mpanapaka ary toerana hisaintsainana, izay voahodidin'ny sary sokitra amin'ireo andriamanitra hindoa telo - Vishnu, Brahma ary Shiva, ary koa demonia tarihin'i Rangda.
Ny mpitsidika dia mahazo miditra amin'ny faritanin'i Tirtaganga manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 18 hariva. Ny tapakilan'olon-dehibe dia mitentina 35 000 ropia, 15 ny tapakilan-jaza.
Manoro hevitra anao ny ho tonga any Tirtaganga ny maraina - amin'ity tranga ity, azonao atao ny misoroka ny hafanana ary manam-potoana hiverenana fotsiny. Ho fanampin'izay, ny 18 dia misokatra ho an'ny besinimaro.
adiresy: Jalan Raya Abang Desa Adat, Ababi, Abang, Kabupaten Karangasem, Bali 80852, Indonesia
telefaonina: + 62 812-3981-5300
Tapakila fidirana ho an'ny olon-dehibe - 35 000 ropia
Tapakila fidirana ho an'ny ankizy - 15 000 ropia
Sarin'ny Lapan'i Tirtaganga
Lapan'ny rano Tirtaganga amin'ny sarintany
Lapan'ny rano Tirtaganga (Lapan'ny rano) (Taman Tirta Gangga)
oh, miala tsiny .. Tany Ujung aho ary tena nampiaiky ahy izy .., saingy tsy nahatratra an'ity lapa ity aho teo ambonin'ny rano (